Ny tranofiara 'tantara mampihoron-koditra amerikana' dia manolotra ampondra mahatsiravina, sary an-tsaina mifehy ny fanandevozana
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Ny tranofiara 'tantara mampihoron-koditra amerikana' dia manolotra ampondra mahatsiravina, sary an-tsaina mifehy
Tantaran'ny horohoro amerikana dia nanolotra spookiness vitsivitsy haneso ny ho avy American Horohoro Story andiany mihodina. Omaly, nizara ny vaovao izahay fa ny fihodinana dia hanomboka amin'ny fizarana maharitra 1 ora izay mitondra antsika hiverina any Murder House. Raha tsiahivina dia ny trano famonoana olona no fototry ny American Horohoro Story mandritra ny vanim-potoana voalohany. Noho izany, ny fanombohana ny fihodinana amin'ity tantara Murder House ity dia mety tsara.
Ilay tranofiara dia misy vehivavy iray ao amin'ilay akanjo fanandevozana vita amin'ny kofehy, izay nitafy ny lehilahy iray tamin'ny vanim-potoana voalohan'ny AHS. Ilay vehivavy fingotra dia nahita azy tao amin'ny lobby voahodidin'ny efitrano kely misy efitra, samy manana ny fampitahorana avy aminy avy. Ny fampihorohoroana iray izay nanome ahy mangatsiaka dia ilay vehivavy spider enina nanampina, nidina avy teo amin'ny valindrihana. Fa inona izany ?!
Niampita ihany ny fahasahiana sy ny Scooby! Jereo eto ny tranofiara.
Tantara mampihorohoro AmercanAmerican Horohoro StoryFXHuluRyan murphy